Al-shabaab oo Gacanta ku Dhigtay Askar Kenyan ah – Radio Daljir
Janaayo 17, 2016 10:16 b 0
Axad,Janaayo,17-(Daljir)_ Al-shabaab ayaa Bayaan ay soo saartay ku sheegay inay Nolosha ku qabatay 12 Askari oo ka tirsan Ciidamada Millateriga Kenyan ah, kuwaasoo ay sheegtay inay ku qabatay weerarkii ay ku qaaday saldhigga AMISOM ee deegaanka Ceel-cadde.
“Weerarkii saldhigga Ceel-cadde ee Jimcihi dhacay waxaan ku qabannay 12-askari oo nool oo ka tiran ciidamada millateriga Kenya. Tirada ka dhimashada Askarta Ciidanka Kenyana waxay gaartay 100 Askari,” ayaa lagu yiri bayaanka, waxayna kooxdu xustay in dagaalkan uu ahaa mid kii ugu khasaaraha badnaa ee ay u geystaan ciidanka Kenya ee Soomaaliya ku sugan.
Sidoo kale, Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaas ay fuliyeen Guutada – Saalax Nabhaan uuna howlgalkaas ahaa mid si guul leh kusoo dhammaaday, laakiin ma sheegin khasaaraha dhankooda kasoo gaaray dagaalka.
28-Ajaanib ah oo lagu Dilay Hotel ku yaala Burkina-Faso